Puntland oo sheegtay inaysan dhallinyaradu fursado shaqo ka helin dhanka maamulka. – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay inaysan dhallinyaradu fursado shaqo ka helin dhanka maamulka.
Garoowe, May 09 – Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyaradda iyo ciyaaraha Puntland Cabdiwali Xirsi Cabdille ayaa waraysi uu maanta (Isniin) siiyey idaacada Daljir waxaa uu ku sheegay in aysan dhalinyardu ka helin maamulka Puntland fursado shaqo oo badan, waxaana uu intaasi raaciyay in loo baahanyahay in laga gudbo arimahaasi si dalku u gaaro horumar.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dhalinyarada looga baahanyahay in ay ka waantoobaan falalka xun xun ee ay ka dhexmuuqdaan, sida dagaalada siyaasadeed, kuwa qabiilka, iyo burcada badeeda, isagoo intaasi ku daray in ay dhalinyaradu yihiin kuwa kaliya ee bulshada u horseedi kara horumarka iyo mustaqbal wanaagsan.
Sikastaba ha ahaatee, dhalinyarada ayaa waxaa ay inta badan ku eedeeyaan maamulka Puntland in uusan dhalinyarada siin fursadihii ay ka heli lahaayeen dhinaca maamulka.
Hadalka wasiirka ayaa kusoo aadaya xilli loo diyaar garoobayo xuska asaaskii ururkii wadaniga ahaa ee SYL oo ku aadan 15 May kaasoo inta badan laga xuso deegaanada Puntland.
C/raxman Xuseen Xasan ?Gaardi?